ဒီအချိန်ရောက်လာမှာကိုစိုးကြောက်မိပါသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ဒီအချိန်ရောက်လာမှာကိုစိုးကြောက်မိပါသည်
Posted by naywoon ni on Nov 11, 2010 in Cultures, Drama, Essays.., How To.. | 26 comments
ရုံးတွေမှာဆိုလဲ ခွဲတန်းနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်က ဘယ်လောက် .. အသုဘက ဘယ်လောက် မဖြစ်မနေထည့်ရတယ် .. အဲဒီတော့ ၀န်ထမ်းမိသားစုတွေ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းနေရတယ် (အသုဘမဖြစ်အောင်)… မင်္ဂလာဆောင်ကတော့ ဆုတောင်းရင် ၀ဋ်လည်မှာဆိုးလို့ ဆုမတောင်းရဲဘူး …
ဒီ ဓလေ. တွေ ကို ဖျက် ဆီး ဖို. က ကျွန် တော် တို. ခင်ဗျား တို. ကြိုး စား ဖို. လို တယ် … ပြီး ရင် ကျွန် တော်. တို. ခင်ဗျား တို. ရဲ. ညီ ၊ ညီမ ငယ် တွေ ကို အား ကိုး မ ပဲ ရ တော. မယ် …… ။
ကျနော်အမြင်ပြောရရင်တော့ ကိုယ်လှူချင်ရင် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လှူ
ဒါပေမယ့် ကုသိုလ်အတူပါဝင်ရအောင်ဆိုတဲ့ မျက်နှာဖုံးစွတ်ပြီး
နေရာတကာမှာ ကထိန် အလှူကြေးကို ဆက်ကြေး ၊ကောက်သလိုကောက်တာကတော့ ရပ်တန်းကရပ်သင့်ပါပြီ။
လှူဒါန်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ်စိတ်ပါမှ စိတ်ပြတ်မှ ကိုယ်ဆန္ဒအလျှောက်လှူရတာ အကောင်းဆုံးပါ။
မင်္ဂလာဆောင်ကတော့ ရှေးကတည်းက ဘ၀ကို အခုမှစတင်မယ့် ဇနီးမောင်နှံအတွက် ၀ိုင်းဝန်းလို့ ကူညီတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်နိုင်သလောက် ဆိုတာ အကောင်းဆုံးပါ။
“သေရင်ကိုယ်နောက် ဒါလေးဘဲပါမှာ”ဆိုတဲ့ ခပ်တိမ်တိမ်အတွေးနဲ့ နောက်ဘ၀စိတ်အေးရအောင် အခုဘ၀ကတည်းက ဘဏ်မှာငွေစုလက်မှတ်ဝယ်သလို အလှူအတန်းတွေလုပ်တာကိုတွေ့တော့ ရီချင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ” မရှိလို့ မလှူ မလှူလို့မရှိ”ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုဘနုးပြ
ကုသိုလ်ရေးဆိုတာနဲ့ကိုင်ပေါက်လို့ ကာယကံရှင်မှာအဆင်ပြေလား မပြေလား မသိဘဲ ဇွတ်ကို ခွဲတမ်းချလို့အလှူခံတာတွေ့ မြင်ရတော့ စိတ်မောပါတယ်။
ကျနော်ပြောတာ မှန်တယ်မှားတယ်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မမေးပါဘူး
koko nwar says:
အမှောင်ထုထဲမှာ ပျောက်နေတဲ့ ကွက်လပ်လေးတခုကို အနီရောင်နေလုံးကြီးက မီးမောင်းထိုးပြလိုက် သလိုပါပဲ။ စကားမစပ် မန်းလေးဂေဇက်အတွက် နှစ်သစ်ကူး အလှူငွေလေးများ ထည့်ဖို့စိတ်ကူးလေး မရှိဘူးလား။ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် မကြာခင် အလှူငွေကောက်ပါ့မယ်။
အစီအစဉ် သေချာ ပြောပြရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့… နှစ်သစ်ကူး အရက်သောက်ဖို့ ဆိုရင်တော့.. လှူဘူး.. ကိုယ်ဟာကို တောင် သီလ လုံအောင် မနဲ နေရတာ.. သူများ သီလပျက်တဲ့ အလှူမျိုးဆို.. ရှောင်ကျဉ်ပါ၏
သဒ္ဒါကြေးဆိုရင်တော့ ရတယ်လေ ။
ကိုပေါက်ရေ သဒ္ဒါကြေးလို့တော့ ပြောကောတ်ကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ 1000 အောက် မနည်းစေနဲ့နော်လို့ထပ်ပြောလိုက်တော့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိ တော့ပါဘူး။ရုံးမှာဆိုရင် သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းရဲ့မိန်းမ ကလေး မွေးတာလဲ သဒ္ဒါကြေးလေး ထည့်ပါအုံး၊ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းမိန်းမကြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ တာလဲ သဒ္ဒါကြေးလေး ထည့်ပါအုံးနဲ့ ဒီကြားထဲ ဂိုဒေါင်ကကောင်လေးတွေစုပြီးအရက်သွားသောက်တာ အပြန်မှာမူးပြီး ကားလမ်းပေါ်တက်အိပ်တာကားတက်ကြိတ်လို့ဆေးရုံရောက်တယ်လေ၊အဲ့ဒါလည်း သဒ္ဒါကြေးလေး ပဲဆိုတော့ … ကုသိုလ်တစ်ပဲ ငရဲတစ်ပိသာဖြစ်နေပြီဗျို့
အဝေးသင် တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် စာမေးပွဲ ဖြေတုန်းကလည်း တနေ့ကို သဒ္ဒါကြေး ၅၀၀ ပေးရတယ်။ စာဖတ်ရတာ စိတ်ညစ်လာလို့ နောက်နေ့တွေ စာဖတ်ပြီး ဖြေရတာ မတန်ဘူး ဆိုပြီး စာမဖတ်ဘဲ သွားလိုက်တာဘဲ.. ကိုယ်ပိုင် မရှိလည်း ဘေးက သူငယ်ချင်းက သူပြီါ်ရင် လှမ်းပေးတယ်။ တနေ့ ၅၀၀ နော်.. အခု ဘယ်ဈေးပေါက်လဲ တော့ သိဘူး
ဦးလေးကြောင်ကြီး ဆီ လှူချင်ရင် အဘခိုင်ဆီက နေတဆင့် ပွိုင့်လှူလိုက်ပေါ့.. လွယ်လွယ်လေး
တီမိုးတို့ကတော့ ချွေးနည်းစာ… တနှစ်စာရှာလို့ရတာလေးတွေကို ကလေးတွေနဲ့ စည်စည်ကားကား လှူချင်တာတခုတည်းပါနော်။
တောက ကလေးတွေဆိုပေမဲ့ သဒ္ဓါတရားရှိကြပါတယ်။
စေတနာရှင်အားလုံးရဲ့ လှူဒါန်းငွေတွေဟာ တနှစ်ကို မနည်းပါ။
နယ်ကျောင်းပေမယ့် ကထိန်တခါခင်းရင် သိန်း၃၀လောက်ကျပါတယ်။
အခြေခံကျောင်းတစ်ကျောင်းသိန်း၃၀x ? ကျောင်းx တနှစ်၂ကြိမ်(ဝါဆို၊ ကထိန်) x ? မြို့နယ်x ?ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး=ပညာရေးဋ္ဌာနမှ သာသနာ၃ရပ်အတွက် လှူဒါန်းငွေ။
အဲဒီနေ့မှာ ပညာရေးမှူးတွေ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးက
ံ၉ပါးသီလဆောက်တည်မယ်ဆိုရင် စားသုံးစားရိတ်ကုန်ကျငွေမရှိလို့ လှူဒါန်းငွေတွေ ဆတိုးလာဦးမယ်။
ဒါတွေအားလုံးကို စာသင်တိုက်တွေအတွက် ဆွမ်းပဒေသာပင် လှူဒါန်းမယ်…………
သဒ္ဒါရင်တော့ လှူကြပေါ့..။ လူမူရေး ဆိုတာကလည်း သာရေး၊ နာရေး အပြန် အလှန် အလှည့်ကျ ထည့်ကြရမှာပဲလေ..။ ရုံးတွေ ကျောင်းတွေက မိုက်ကြေးခွဲတမ်းနဲ့ အလှူခံတွေကလည်း မကင်းတော့ ကောင်းအောင် ပေးလှူနေကြရမှာပဲ..။
ဝူး ​ပြောင်းလဲမယ်​ဆိုတဲ့ပညာ​ရေး က​လေး​တွေ စာသင်​ချိဖျက်​ပြီး အလှူခံထွက်​​နေကြပါ​ရောလား ကထိန်​နီးလာ​တော့ ကထိန်​​ကြေးမထည့်​နိုင်​တဲ့က​လေး​တွေ သနားစရာ
ဘုရားလက်​ထက်​ကလို သင်္ကန်း တစ်​ထည်​နဲ့ခင်းရင်​ဒီလိုအဖြစ်​​တွေမရှိနိုင်​ဘူး
ကျော်ပါဘူး..အဲ့ထဲ ..ကျော်မိန်းမယူရင် လက်ဖွဲ့ခြင်းသည်းခံပါလို့…လုပ်မှာ…ချမ်းသာလွန်းလို့တော့မဟုတ်….ကွကိုယ် ခြင်ထောင်ထောင်ချင်တာ လူများကိုအပူမကပ်ဘူး .. အဟိဟိ ..
လက်မဖွဲ့ခြင်းသီးခံပါ လို့ ဖိတ်စာထဲ ထည့်ရေးရင် ကောင်းမလားလို့ 